Alto's Adventure iri kutengeswa kwenguva shoma | IPhone nhau
Alto's Adventure iri kutengeswa kwenguva shoma
Nekusvika kwezhizha, nguva yemahara inotanga kune vese vana vava kuda kupedza chikoro uye vanogadzira vanoziva izvi uye vazhinji uye vazhinji vari kutora mukana wenguva yemahara yavachave nayo, vari ichipa zvakakosha kuderedzwa pamitambo yavo kana kunyorera kwemaawa mashoma pazuva, tinogona kuvaraidza vadiki vari mumba.
Maawa mashoma apfuura ndakakuzivisa nezvekushandisa Nhanganyaya kuMathematics, iyo inowanikwa kuti utorwe mahara. Asi panguva ino, isu tinotaura nezve inonakidza mutambo Alto's Adventure, yatinogona kutaura zvishoma kuti iwe hausati watoziva, matiri tinoputira ganda remuchadenga watinofanira kunzvenga naye zvipingamupinyi zvese zvatinosangana nazvo munzira. Mutengo wakajairika wemutambo uyu i3,99 euros asi kwemaawa mashoma isu tinogona kuutora iwo chete 0,99 euros.
1 Alto's Adventure Zvinhu
2 Alto's Adventure ruzivo
Alto's Adventure Zvinhu
Isa hunyanzvi hwako pamuedzo uine 180 zvibodzwa zvakagadzirwa nemawoko
Tsvaga vatanhatu vakasarudzika echando, mumwe nemumwe aine hunhu hwavo uye kugona kwavo
Denha shamwari dzako mu Game Center. Kwikwidzana nezvibodzwa zvepamusoro-soro, chinhambwe chikuru, uye yakanakisa combo!
Tora mapapiro kubva kumusangano waIzel kuti uwane mutsva mutambo wemitambo.
Akanaka minimalist uye anoratidza ekuona dhizaini
Mumhanzi wekutanga uye neruoko rwakagadzirwa nemaoko zvinopa ruzivo rwakadzika (tinokurudzira kushandisa mahedhifoni!)
Universal application ine rutsigiro rweICloud. Tamba pa iPhone ne iPad, kufambira mberi kwako kunogara kuri mukuenderana.
Alto's Adventure ruzivo
Compatibility: Inoda iOS 7.0 kana gare gare. Inoenderana ne iPhone, iPad uye iPod Kubata.
Alto's Kutamba5,49 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Alto's Adventure iri kutengeswa kwenguva shoma
Isu tinoongorora Facetune, tinogadzirisa yako weti nyore uye nekukurumidza
Runyerekupe rutsva runovimbisa kuti iyo iPhone 7 inosvika neEarPods uye yeMheni adapter